ပံ့ပိုးမှု, Apps ကပ, ဖိုရမ်, Website များ, စာအုပ်များ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ထောက်ခံမှုမပါဘဲ၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှပြန်ကောင်းလာရန်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဒေသတွင်းလိင်စွဲလမ်းသူအမည်မသိအစည်းအဝေးများ (http://saa-recovery.org/) တွင်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများရှိပြီး၊ အခြားသူများနှင့်သင်ဆက်သွယ်မှုသည်အစည်းအဝေးများမှအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခံစားရသည့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုလည်းသက်သာစေသည်။ တရားသူကြီးမဟုတ်သူများကိုအုပ်စုလိုက်ဖွင့်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကုစားနိုင်ပြီးသင်နေထိုင်သည့်နေရာတိုင်းကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ တယ်လီဖုန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများလည်းကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူတို့နှင့်သင်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဒီတစ်ခုထဲကိုဝင်မယ်
တစ်ဦးကထောက်ခံမှုအုပ်စုတစ်စုနီးစပ်, ရိုးရိုးသားသားမိတ်ဖွဲ့ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်အသုံးပြုသူများသည်အခြားသူများနှင့်အကြံပေးချက်များနှင့်ထောက်ခံမှုဖလှယ်ထံမှအလွန်တရာအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ အောက်ပါဆိုဒ်များအတော်များများဖိုရမ်များ, အစည်းအဝေးများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များရှိသည်။ ယခုအသစ်က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိပါတယ် အရင်းအမြစ်များကြီးမြတ်စာရင်း.
မှတ်ချက်။ ။ သင်ကကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ထံမှအကူအညီတောင်းပါကသူမအနေဖြင့်သူ / သူမအားလေးလံသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအစီရင်ခံတင်ပြသည့်ရောဂါလက္ခဏာအချို့အကြောင်းအရင်ဆုံးသင်ကြားလိုပေမည်။
အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သောရင်းမြစ်များ (မည်သူမျှ YBOP နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အချို့သည်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်)
တစ်ခုက App ရယူပါ:
NoFap အရေးပေါ် App ကို
အေးတူရကီ blocker - (နှင့်အတူ blog post မတူညီသောအခမဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိတ်ဆို့သူများ၏ကောင်းကျိုးများ)
r / လူမျိုး
reboot Nation - ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ် ဖိုရမ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်နာလန်ထူဂျာနယ်ကိုစတင်ပါ၊ “ ဂန္ထဝင်” reboot လုပ်ပါ၊ post လုပ်ပါ၊ မေးခွန်းများမေးပါ၊ မျှဝေပါ၊
NoFap.com - ၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်ရှိပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ Reddit-hosted community ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်စည်းညှိသည်။ NoFap တွင်တာဝန်ခံမှုမိတ်ဖက်ကိုရှာပါ။ တာဝန်ခံမှုမိတ်ဖက်များဆိုသည်မှာညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်တောက်နေစဉ်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်တာဝန်ခံသည့်အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ သင်၏တိုးတက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဂျာနယ်တွဲတစ်ခုဖန်တီးပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတင်ခြင်းကိုတားဆီးရန်တင်းကြပ်စွာဖြည့်တင်းထားသည်။
သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Rebalanced - porn ပြန်လည်နာလန်ထူရန်အစောဆုံးဖိုရမ်တစ်ခု၊ PIED၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဂျာနယ်ကိုစတင်ပါ။
NoFap subreddit - reddit အပေါ်အလွန်တက်ကြွဖိုရမ်။
PornFree subreddit - ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအားကူညီရန်ရပ်ရွာ။
porn စွဲ subreddit - ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအားကူညီရန်ရပ်ရွာ။
NoFap ခရစ်ယာန်တွေကို subreddit - reddit အပေါ်ဖိုရမ်။
MuslimNoFap - reddit အပေါ်ဖိုရမ်။
r / TGandSissyRecovery - ညစ်ညမ်းသောအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲများနှင့်ရုန်းကန်နေရသူများအတွက် Reddit support group
နေ့စဉ်ခွန်အား: လိင် / ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ Support Group မှ - လိင် / porn စွဲသူများနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်တက်ကြွသောဖိုရမ်။
အိုမီဂါလူသားအရင်းအမြစ်များ - YBR အသင်း ၀ င်မှအရင်းအမြစ်များစာရင်း
www.porno-sucht.com - ဂျာမန်စကားပြောအွန်လိုင်းရင်းမြစ်
အီတလီပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ် - RebootNation နှင့်ဆင်တူသည်
ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်၏ဘဝကိုသိမ်းပိုက်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ - ယူပါ အဆိုပါ porn စွဲစမ်းသပ်။
NoFap ဆယ်ကျော်သက် subreddit - ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် reddit အပေါ်ဖိုရမ်
ပြုပြင်လိုသော - ပို့စ်များအားလုံးကိုဖြည့်ထားပါသည်
လူငယ်သာယာဝပြောရေးစီမံကိန်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ရန်၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များ၏ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောယဉ်ကျေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်ဘက်စုံဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးကိုပေးသည်။
ယဉ်ကျေးမှု Reframed - hypersexualized မီဒီယာနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ခုခံခြင်း
ဟာသ - လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း combat တိုက်ခိုက်ရန်igital ခေါင်းပုံဖြတ် နှင့် v တည်ဆောက်alue- မောင်းနှင်မီတာedia အလေ့အထများ
မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူရုန်းကန်အမျိုးသမီးများ
PornFree အမျိုးသမီးများနေ့ - အမျိုးသမီးများအတွက်
အမျိုးသမီးများလိင် / ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲ Drop-In ဆွေးနွေးချက်အဖွဲ့ - အင်္ဂါနေ့ @ 6:00 pm - ည 7:00 pm PDT
အဆင့် ၁၂ ဆင့်မဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆိုက်များနှင့်အစီအစဉ်များမှပံ့ပိုးမှု -
PornHelp.org - လူများအား porn မှထွက်ခွာရန်ကူညီပါ
PMO Flatline - ဒီဟာစီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အခမဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအများကြီးရှိတယ်
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ - နော Church ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (အထူးသဖြင့် PIED အတွက်သင်တန်းပေးသည်)
PornFree ရေဒီယို - Matt Dobschuetz ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ယဉ်ကျေးမှု Reframed မိဘများအစီအစဉ် -“ လူငယ်များသည် hypersexualized ယဉ်ကျေးမှုများကြားမှရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်ကူညီပါ”
မာကု Queppet: - နည်းပြ၊ ခေါင်းဆောင် nofap အကယ်ဒမီ။ အလည်အပတ် မိမိအဗီလော့ဂ်.
recovery ကို Nation - အခမဲ့အစီအစဉ် (အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ နည်းပြများ)
YBR မှ Recovery Nation အစီအစဉ်အကြောင်းဆွေးနွေးပါ
အဆိုပါအလင်းစီမံကိန်း - နယူးဇီလန် (ရင်းမြစ်အများအပြားစာရင်း)
porn အခမဲ့ပါဝါ - နည်းဗျူဟာများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပါ ၀ င်သောအခမဲ့လမ်းညွှန်
, သင်နှစ်သက်သော porn ကိုမုန်း - ဘလော့ဂ်၊ စုံတွဲများအတွက်အချက်အလက်ကောင်း
Healthysex.com - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆောင်းပါးများ။ ၏စာရေးဆရာများ “ ညစ်ညမ်းသောအရာ”
အဆိုပါလိင်ဘုရားသခငျသညျစီမံကိန်း - လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတစ် ဦး မှစတင်ခဲ့သည်
သစ်တည်ဆောက်ခြင်း - သတိနှင့်သနားကြင်နာမှုမှတစ်ဆင့်စွဲရောဂါပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ခြင်း
အဆိုပါ Fortify အစီအစဉ် - ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ် (၂၁ နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုအခမဲ့)
အတွင်းစိတ်ရွှေ - ဘလော့ဂ်၊ ဗီဒီယိုများ၊ အကြံပေးခြင်းနှင့်စွဲခြင်းအစီအစဉ်များ။
Healthystrokes: စိတ်ထိခိုက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ syndrome ရောဂါ - အကယ်၍ သင်သည်မျက်နှာတစ်ဖက် (ပျော့ပျောင်းသော) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူဖြစ်လျှင်ဤ link ကိုသင်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်
www.sexaddictionhelp.co.uk - အခမဲ့မိမိကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအရင်းအမြစ်
New York ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရေးစင်တာ - ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်အုပ်စုလိုက်ကုထုံးအပြင်တစ် ဦး ချင်းအကြံပေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးသည်
porn ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်ဝီကီ - porn နှင့် porn ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Recovery ကိုအင်စတီကျု - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဆောင်းပါးများ။
Impulse ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းကြောင်း Institute က - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆောင်းပါးများ
ဆင်ခြင်တုံတရား Recovery ကို - စွဲလမ်းမှုအားလုံး။
SMART Recovery® - စွဲလမ်းမှုအားလုံး။ တက်ကြွသောဖိုရမ်၊ အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများ၊ အရင်းအမြစ်များစွာ။
အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါအဖွဲ့များမှပံ့ပိုးမှု -
Porn စွဲအမည်မသိ - လိင်ကွဲပြားသူအားလုံးသည်လိင်တူချစ်သူများအားကြိုဆိုသည်
ညစ်ညမ်းစွဲ Anonymous.org - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်ကြိုးစားသူများအတွက် ၁၂ ဆင့်ပါမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း
SLAA သည်အွန်လိုင်းနှင့်ဖုန်းအစည်းအဝေးများပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များသည်လမ်းပေါ်ရှိနေစဉ်ဖုန်းအစည်းအဝေးများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကွန်ပျူတာဖြင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ကိုအကန့်အသတ်ရှိသောသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်စကားဝိုင်းပြissuesနာများရှိသူများအတွက်ဖုန်းအစည်းအဝေးများသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ http://www.slaafws.org/အစည်းအဝေးများ"
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အမည်မသိ
လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲအမည်မသိအွန်လိုင်း Group မှ - အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများ
APSATS | လိင်စွဲစိတ်ဒဏ်ရာအထူးကု၏အပေါင်းအဖေါ်များ၏အစည်းအရုံး - အထူးကုတစ် ဦး ကိုရှာပါ
ကေတီ Korzen နည်းပြ - မိတ်ဖက်များအတွက်နည်းပြအရင်းအမြစ်
Reddit အသိုင်းအဝိုင်း - Porn ပြီးနောက်မတ်ေတာသညျ - မိတ်ဖက်များအတွက်အရင်းအမြစ်
သစ္စာဖောက်စိတ်ဒဏ်ရာ Recovery ကို - အမျိုးသမီးများမိမိတို့၏ခင်ပွန်း၊ ခင်ပွန်းဟောင်းသို့မဟုတ်ရည်းစား၏အပြာစာပေ၊ လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသောအပြုအမူများကိုအမျိုးသမီးများအားလမ်းညွှန်ရန်အကျိုးအမြတ်မယူသောအကျိုးအမြတ်မယူပါ။ ၎င်းသည်မုသာစကား၊ ဖောက်ပြန်မှု၊ မီးထိုးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးသည်
မျှော်လင့် & ကုသမှုဖိုရမ် / ဘလော့ဂ် - ချစ်ရသူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုခံစားနေရသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ရပ်ရွာ
Healthysex.com - ကျန်းမာသောလိင်နှင့်ရင်းနှီးမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း
PoSARC - လိင်စွဲလမ်းအရင်းအမြစ်စင်တာ၏အပေါင်းအဖေါ်များ
COSA - ဤသည်မှာလိင်စွဲလမ်းသူများအမည်မဖော်လိုသူအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Impulse ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းကြောင်း Institute က
မိတ်ဖက်များအတွက်စာအုပ်များ - နှင့်စုံတွဲများကိုငြိမ်းစေလျက်:
အပြင်သစ္စာဖောက် Moving: များ၏အပေါင်းအဖေါ်များများအတွက် 5-အဆင့်နယ်နိမိတ်ဖြေရှင်းချက် ...
ကြေကွဲဖွယ်ရင်ဆိုင်ခြင်း: လိင်စွဲလမ်း၏အပေါင်းအဖေါ်များအဘို့ Recovery ကိုမှခြေလှမ်းများ
Intimate ၏သစ္စာဖောက်ကုစားခြင်းများအတွက်ထုတ်ဖော် :: တစ်ဦးကအဖော်ရဲ့လမ်းညွှန်အသက်ဆက်ရှင်သန်ခြင်း ...
, သင်နှစ်သက်သော Porn အမုန်း: Virtual အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ပျက်ဆီးနေသောတစ်ဦးဆက်ဆံရေးကိုကုစားခြင်း
သူငယ်ချင်းမဟုတ်ပါ - ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်၏စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း…
[3rd Edition ကို] ကရိပ်ရင်ဆိုင်ခြင်း: လိင်စတင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး Recovery ကို
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ (2nd ထုတ်ဝေ, 2017)
Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ နောဧသည်အားဖြင့်ဘုရားကျောင်း BE
အခမဲ့စာအုပ် - အဆိုပါ EasyPeasy Method ကို။ ဤစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်. Thread နှစ်ခု: YBR နှင့် RBN
Man, Interrupted: လူငယ်တွေဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေကြရသလဲ၊ ဘာကြောင့်ငါတို့လုပ်နိုင်တာလဲ ဖိလိပ္ပု Zimbardo & Nikita D. Coulombe ကပြုလုပ်သည်
အဆိုပါ Porn Trapက Wendy & လာရီ Maltz
လိင်စွဲလမ်းနားလည်မှုနှင့်ကုသခြင်းက Paula ခန်းမ
အဆိုပါ Cycle Breaking: လိင်စွဲလမ်း, Porn obsessive, အရှက်ကွဲခြင်းကနေကိုယ်သင် Freeဂျော့ Collins အားဖြင့်
ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်,-Norman Doidge အားဖြင့်
, သင်နှစ်သက်သော Porn အမုန်း: Virtual အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ပျက်ဆီးနေသောတစ်ဦးဆက်ဆံရေးကိုကုစားခြင်း, Mark Chamberlain & Geoff Steurer အသုံးပြုပုံ
မစ္စတာ Nice Guy အဘယ်သူမျှမပို!ရောဘတ်တစ်ဦးကဂလိုဗာအားဖြင့်
အထဲက Porned: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်7ပိုပြီး porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ (တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်) အကြောင်းပြချက်များက ဘရိုင်ယန် McDougal
“ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်မဟုတ်ဘူး” \_ t, ဂျက်ဖရီ Schwartz, OCD ဆကျဆံသူတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုဆရာဝန်များက
အဆိုပါသို့အနည်းငယ်ကွေ့ Edge: ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသို့ရိုးရှင်းသောစည်းကမ်းဖွင့်
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှအခမဲ့မိဘများ '' လမ်းညွှန်
ယဉ်ကျေးမှု Reframed မိဘများအစီအစဉ်
NFA Reboot စခန်းယခုဖွင့်လှစ်!
ဦးလေး Bob ၏ Porn Recovery ကို Inspiration